စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကျွေးကိုတက်ရောက် ရင်း မထင်မှတ်ဘဲ ရိုက်မိခဲ့တဲ့ပုံလေး ကြောင့် ပရိသတ်တွေတော်တော်များ များရဲ့ စနောက်အရွှန်းဖောက်ခံနေ ရ တဲ့သားညီ – XB Media Myanmar
Myanmar Celeပရိသတ်ကြီးရေ သားညီက တော့ ရုပ်ရှင်လောကမှာထိပ်တန်းစူပါမင်း သား ကြီး တွေရဲ့မျိုးဆက်တစ်ဦးပါ။သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သရုပ်ဆောင်အပြင် အခုချိန်မှာ ဒါရိုက် တာ တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေသူပါ။ သူရိုက်ကူးတဲ့ကြော်ငြာတွေကအစပရိသတ်တွေသ ဘော ကျအားပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုလည်းရိုက်ကူးနေသူပါ။
မနေ့ကကျရောက်တဲ့ နိုဝင်ဘာလ၅ရက်နေ့မှာ စည်ဖြိုးနဲ့ခင်လွှမ်းတို့ရဲ့ မင်္ဂလာမော်ကွန်းတင် လ က် မှတ်ရေးထိုးပွဲ နှင့် မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကျွေးအလှူကို ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး အနုပညာမောင်နျ မေ တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ” စည်ဖြိုး မင်္ဂလာဆောင်ကပုံတော်တော်ပေါက် တ ယ် !!!ငါလည်း ဒါရိုက်တာပီသတယ်နေရာယူတတ်ပုံများ ကွက်တိပဲ !!!သားညီ ”ဆိုတဲ့စာလေး နဲ့အရွှန်းဖောက်ပြောပြခဲ့တာပါ။
Wedding ပုံလေးမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ရိုက်မိခဲ့တဲ့ပုံလေးကြောင့် ပရိသတ်တွေတော်တော်များများ လည်း စနောက်အရွှန်းဖောက်နေကြတာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Myanmar Cele- ပရိသတ် ကြီး အားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက် ပါ တယ်နော်။
Myanmar Celeပရိသတ္ႀကီးေရ သားညီက ေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွာထိပ္တန္း စူ ပါ မင္း သား ႀကီး ေတြရဲ႕မ်ိဳးဆက္တစ္ဦးပါ။သူကိုယ္တိုင္ကလည္း သ႐ုပ္ေဆာင္အျပင္ အခုခ်ိ န္မွာ ဒါ႐ိုက္ တာ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသူပါ။ သူ႐ိုက္ကူးတဲ့ေၾကာ္ျ ငာေတြက အစပရိသတ္ေတြသ ေဘာ က်အားေပးခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားေ ပါင္းမ်ား စြာကိုလည္း႐ိုက္ကူးေနသူပါ။
မေန႔ကက်ေရာက္တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ၅ရက္ေန႔မွာ စည္ၿဖိဳးနဲ႔ခင္လႊမ္းတို႔ရဲ႕ မဂၤ လာေမာ္ကြန္းတင္ လ က္ မွတ္ေရးထိုးပြဲ ႏွင့္ မဂၤလာဦး ဆြမ္းေကြ ၽးအလႉကို က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အႏုပညာေမာင္န် ေမ ေတြတက္ေရာ က္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ” စည္ၿဖိဳး မဂၤလာေဆာင္ကပုံေတာ္ေ တာ္ေ ပါက္ တ ယ္ !!!ငါလည္း ဒါ႐ိုက္တာပီသတယ္ေနရာယူတတ္ပုံမ်ား ကြက္တိပဲ !!!သားညီ ”ဆိုတဲ့စာေလး နဲ႔အ႐ႊန္းေဖာက္ေျပာျပခဲ့တာပါ။
Wedding ပုံေလးမွာ မထင္မွတ္ဘဲ ႐ိုက္မိခဲ့တဲ့ပုံေလးေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြေတာ္ေ တာ္မ်ားမ်ား လည္း စေနာက္အ႐ႊန္းေဖာက္ေနၾကတာပါ။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Myanmar Cele- ပရိသတ္ ႀကီး အားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန ႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပး လိုက္ ပါ တယ္ေနာ္။